RASMI: Tababaraha ku guuleysatay abaal-marinta macalinka bisha March ee Premier League oo la shaaciyay – Gool FM
(England) 02 Abril 2021. Waxaa la shaaciyey tabaraha ku guuleystay abaal-marinta macalinka bishii March ugu fiicnaa ee horyaalka Premier League, waxaana ku tartamayay magacyada ilaa iyo afar macalin oo wacdaro ka dhigay horyaalka bishii la soo dhaafay.
Sida lagu xusay bogga rasmiga ah Twitter-ka ee horyaalka Premier League tababaraha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa ku guuleystay abaal-marinta macalinkii ugu fiicnaa horyaalka Premier League ee bishii lasoo dhaafay ee March.
Macalinka reer Germany ayaa ku guuleystay abaal-marintan kaliya labo bilood kaddib markii loo magacaabay tababaraha Blues, isagoo bedelay Frank Lampard oo shaqada laga ceyriyay.
Thomas Tuchel ayaa abaal-marintan ku garaacay tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær, macalinka Brighton ee Graham Potter, iyo Brendan Rodgers oo leyliya Leicester City.
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta laacibka ugu fiicnaa bisha March ee Premier League oo la shaaciyay